तपाईलाई दिनकै तनाव हुन्छ ? तनाव हटाउन यी खानेकुराको नियमित सेवन गर्नुहोस् तनाव सँधैका लागी टाढा हुन्छ – Etajakhabar
तपाईलाई दिनकै तनाव हुन्छ ? तनाव हटाउन यी खानेकुराको नियमित सेवन गर्नुहोस् तनाव सँधैका लागी टाढा हुन्छ
केरा केरामा पोटासियम र कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । केरा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन नाम गरेको न्युरोट्रान्समिटर बढी उत्सर्जन हुन्छ, जसले तनाव कम गरी मानिसलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ । तनाव छ भने दिनमा दुइटा केरा खाने गर्नुस् ।
स्याउ स्याउमा फोस्फोरस र आइरन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छन् । तनाव उत्पन्न भएको बेला खुम्चिएका कोषिकालाई यसले पूर्वअवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा तनावको असर कम हुँदै जान्छ । खासगरी तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको बेला प्रतिदिन एउटा स्याउ खानु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०७४ समय: ११:१३:४७